Vavaka hanoherana ny fahafatesana am-boalohany | FIVAVAHANA VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Vavaka hanoherana ny fahafatesana am-boalohany
Vavaka hanoherana ny fahafatesana am-boalohany
Febroary 6, 2019
Salamo 91: 16:
16 Hovokisako izy amin'ny fotoana ela ary hampiseho azy ny famonjeko.
Androany isika dia hanao vavaka manohitra ny maraina fahafatesana. Hataon'Andriamanitra ho an'ny zanany rehetra ny hoe miaina ela velona sy mahatanteraka isika. Ny fahazavana na ny fahafatesana aloha loatra dia tsy sitrapon'Andriamanitra ho antsika, ao amin'ny Eksodosy 23:25, Andriamanitra dia nampanantena antsika fa hiaina mba hahatanteraka ny andro sy Salamo 91:16 Nilaza izy fa ho afa-po amin'ny fiainana lava isika. Fahafatesan'ny zavamiaina rehetra ny fahafatesana, saingy tian'Andriamanitra hiaina fiainana lava sy sambatra eto an-tany isika. Ny ankamaroan'ny razantsika nanao fanekena izay nanompo an'Andriamanitra tao amin'ny Baiboly dia niaina fiainana naharitra sy naharitra. Niaina nandritra ny 175 andro i Abrahama, Genesisy 25: 7, dia nipetraka i Isaka nandritra ny 180 taona; Manompo an'Andriamanitr'i Abrahama, Isaka ary Jakoba isika, noho izany dia mendrika ny hiaina fiainana lava sy mahatanteraka isika rehetra.
Rehefa mandray am-bavaka an'io fanoherana ny fahafatesana io isika dia hiteny amin'ny fanahin'ny fahafatesana sy ny helo, hanariharintsika azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. I Kristy dia nandoa ny vidiny farany amin'ny fanavotana antsika, ary nandrava ny herin'ny fahafatesana sy ny helo izy ary nanangona ireo lakile (manam-pahefana), ambonintsika, Apokalypsy 1: 17-19. Koa amin'ny maha zanak'Andriamanitra azy, ny fahafatesana dia mahalala ny fahefana antsika satria ao amin'i Kristy Jesosy isika. Mivavaha am-bavaka izao amin'ny fahatakarana fa ny fahafatesana dia tsy manan-kery aminao amin'ny maha-kristiana anao. Fantaro fa tsy mahazo alàlana ho faty tsy maty na tsy alohan'ny fotoana ianao, tsy avela ho faty aloha na alohan'ny fotoanao eto amin'ity tontolo ity. Amin'ny maha zanak'Andriamanitra anao, ny fiainana lava no anjaranao ary azonao atao ny mankafy fiainana tanteraka eto an-tany. Rehefa mivavaka am-pinoana miaraka am-pinoana anio ianao dia manambara fa hahita ny zanakao lehibe ianao amin'ny taranaka fahefatra amin'ny fahasalamana sy fahatsarana amin'ny anarana jesosy
1. Ray ô, misaotra anao aho noho ny herin'ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fiainana.
2. Manafaka ny tenako amin'ny ozona rehetra amin'ny fahafatesana tsy an-kanavaka aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
3. Izaho dia mivadika ny fanekena rehetra tsy mahasoa amin'ny fahafatesana tsy hay lazaina, amin'ny anaran'i Jesosy.
4. Esoriko amin'ny aloky ny fahafatesana rehetra ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
5. Mamatotra sy mahavoa ny matanjaka rehetra amin'ny fahafatesana sy ny helo aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
6. Tompo ô, ampaherezo ny tenako, ny fanahiko sy ny fanahiko.
7. Ny tsiambaratelo rehetra momba ny ady amin'ny fiainako ara-panahy dia haseho, amin'ny anaran'i Jesosy.
8. Manafaka ny tenako amin'ny herin'ny fanahy malemy aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
9. Misotro ny ran'i Jesosy ao amin'ny rafitra rehetra aho.
10. Tompo ô, amboary ny fefy afo manodidina ahy.
11. fanahin'ny fiainana, soloy ny fanahin'ny fahafatesana amin'ny fiainako, amin'ny anaran'i Jesosy.
12. Lozan'ny vaky demonia, izay hampiasain'ny fahavalo handratra ahy ara-panahy amin'ny anaran'i Jesosy.
13. Ray Tompo ô, avelao ny voninahitrao hanarona ny lafiny rehetra amin'ny fiainako amin'ny anaran'i Jesosy.
14. Raiko Tompo, avelao ny anjelinao hitoby manodidina ahy, amin'ny anaran'i Jesosy.
15. Izaho dia mandà sy manafoana ny fanekena mahafaty rehetra izay nataoko na nataoko ho ahy amin'ny anaran'i Jesosy.
16. Nesoriko ny tanan'ny olona maty, tamin'ny anaran'i Jesosy.
17. Mitsangana indray aho isaky ny fanekena ny fahafatesan'ny tampoka, amin'ny anaran'i Jesosy.
18. Ny tsodrano rehetra nataoko izay nalevina tamin'ny tany na ambanin'ny rano, dia halefa amin'ny afo, amin'ny anaran'i Jesosy.
19. Hanafoana ny anarako amin'ny lisitry ny maty aho, amin'ny anaran'i Jesosy.
20. Toheriko amin'ny karazana zava-doza rehetra amin'ny anaran'i Jesosy.
Misaotra anao Ray noho ny famaliako ireo vavaka nataoko tamin'ny anaran'i Jesosy.
Previous lahatsoratraTorohevitra 40 Mba hofoanana ny nofinofy ratsy
Next lahatsoratraNy herin'ny vavaka amin'ny fiainantsika andavanandro.
Mary 21 Novambra 2019 Amin'ny 9:06 maraina
Eny tokoa, pasitera Chinedum ny kristiana rehetra dia tokony hitsangana hivavaka ho azy ireo hahita ny fihetsehan'Andriamanitra any amin'ny fiainan'izy ireo. Aoka isika hanaisotra ny hakamoana eo amin'ny fiainantsika ary hitodika any amin'ny fiainana hivavaka mahery. Te-hisaotra an 'ANDRIAMANITRA aho noho ny fiainanao sy ny fanomezanao ahy ahy amin'ireo vavaka mahery sy miavaka nalefanao tao amin'ny boaty misy ahy. Mino aho fa hanaporofo fivoahana amin'ny lafiny rehetra ny fiainako. HOTAHIAN'ANDRIAMANITRA ANIE IANAO!
Yvonne 16 Janoary 2020 Amin'ny 6:35 hariva
Ry lehilahin'Andriamanitra ô, misaotra an'ireto vavaka mahery ireto ireto. Tonga tamin'izy ireo aho tamin'ny fotoana tena nilaiko azy ireo.
Hotahin'Andriamanitra sy ny fanompoanao ianao.
melkof 4 jona 2021 Amin'ny 2:28 hariva
SALAMO 107 Ilay Andininy Hafatra amin'ny Andininy
Aprily 26, 2020
Teboka vavaka Hivavaka rehefa miahiahy ianao
Vavaka fanoherana ady amin'ny firenena
Febroary 21, 2021